--Lọ - Cazoo
Azịza ya dị nnọọ mfe, Cazoo na-enye ya! nft.cazoo.a mụrụ na mmalite nke 2022 na arịrịọ nke otu obodo, bụ nke na-abawanye na-elekọta arịrịọ maka imekọ ihe ọnụ ...
Nọgide na-agụKedu mkpokọta NFT ọhụrụ na-abịa na 2022?
Ego na Binance ụgwọ
Azụmaahịa ọ bụla, ọrụ ego ọ bụla a na-eme na Binance, Exchange kachasị na ụwa taa, nwere ụgwọ, ọrụ, ụgwọ. Ọ bụrụ na ịdebanyeghị aha na ...
Nọgide na-agụEgo na Binance ụgwọ
Ntuziaka zuru oke iji ghọta otu esi eji Binance
Ka anyị chọpụta ihe Binance bụ, otu esi eji ya na otu ị ga - esi zụta ma ree cryptocurrencies na nnukwu gigantic a.
Nọgide na-agụNtuziaka zuru oke iji ghọta otu esi eji Binance
Edemede kwuru:Nkwupụta 0
N'ime oge ọkọchị, egwuregwu bọọlụ niile nke Europe na-akwụsị asọmpi ya maka ọnwa ole na ole, karịa ma ọ bụ obere, ezumike kwesịrị ekwesị. N'ezie, June bụ ọnwa nke ha anaghị ele ibe ha anya ...
Nọgide na-agụSorare: kedu asọmpi a na-enwe n'oge okpomọkụ? Emelitere 2022
Ndị na-emepụta ahịa akpaghị aka na-akpali ndị ọrụ ka ha bụrụ ndị na-eweta ego n'ụdị mgbanwe maka òkè nke ụgwọ azụmahịa na akara ngosi efu. Mgbe a mụrụ Uniswap na ...
Nọgide na-agụKedu ihe bụ AMM, Onye nrụpụta ahịa akpaaka?
CryptoCompare ọhụrụ kwa ọnwa akụkọ na-egosi Binance weghaara fọrọ nke nta ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngụkọta ego ahia na cryptocurrency nyiwe na March 2022. Ọ dịghị unere. Dị ka akụkọ na nso nso a si ...
Nọgide na-agụBinance ọ dị mma? Ọ jisiri ike 30% nke ntụpọ ntụpọ nke ego crypto maka Machị 2022
TL: DR Mgbe ị na-ahọrọ ịzụrụ ma ọ bụ ree NFT, ị kwesịrị ịnwe ụfọdụ metrik n'uche iji tụọ uru ọ bara. Agụrụ m asatọ, metric asatọ...
Nọgide na-agụMetiriks ị ga-atụle maka ịzụrụ na ire NFT
TL: Mkpụrụ ego nzuzo DRLP bụ ego crypto nwere ike zoo ma ọ bụ mebie azụmahịa na blockchain iji nọgide na-enwe ọkwa dị elu nke nzuzo na amaghị aha. Usoro cryptographic ha dị elu bụ ihe ...
Nọgide na-agụMkpụrụ ego nzuzo iri kacha mma yana otu esi azụta ha
Otu esi achọta NFT na-eme 100x?
Kedu onye na-agaghị achọ iji ntinye ego NFT mee x50 ma ọ bụ x100? Agbanyeghị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe gbagwojuru anya karịa na cryptocurrencies, n'ihi na enwere ọtụtụ ihe pụrụ iche ...
Nọgide na-agụNFT: Ntuzi zuru oke maka ịchọta 100x na-esote!
Anyị agụọla akụkọ Nonfungible kacha ọhụrụ, raara nye ụwa NFT. Anyi atukwasiri obi Nonfungible? Onye m bụ? Tọrọ ntọala na 2018 na mbụ iji soro azụmahịa Decentraland ozugbo, ụlọ ọrụ ahụ ...
Nọgide na-agụAkụkọ NFT: 2021 bụ afọ nwere nnukwu uto
Enyemaka bọọlụ: gbanye fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD na Binance
TL: DR Binance na-ebupụta asọmpi ọhụrụ, asọmpi egwuregwu bọọlụ. Onye ọ bụla na-azụ ahịa kachasị enweta ego BUSD. Iji mee ememme ngwụcha Copa America na EURO Cup, yana mmụọ asọmpi nke ...
Nọgide na-agụEnyemaka bọọlụ: gbanye fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD na Binance
Ndị na-abụghị Fungible Tokens (NFTs) emeriela ụwa. Ọ gwụla ma ibi na ọgba, ebe wifi na-adị njọ nke ukwuu, ị nụgoro maka nke ọhụrụ a ...
Nọgide na-agụỌnọdụ NFance Binance: Nchịkọta nke Andy Warhol, Salvador Dalì
Mmelite kachasị ọhụrụ nke Metamask na-eme ka ndụ dịrị ndị na-ahụ Binin Smart Chain mfe: ọ ga-ekwe omume ugbu a ịgbanwe tokens ozugbo na desktọọpụ ma ọ bụ obere akpa mkpanaaka. Ọrụ Swap na-agwakọta data ...
Nọgide na-agụNkwalite Metamask: Gbanye na Binance Smart Chain ozugbo na obere akpa Metamask
Ee ee! India, nke gosiputara otutu iro megide cryptocurrencies, enyela ndi komiti ugbua ka ha nyefee ndi isi ulo oru a n’oge na adighi anya. Mgbe…
Nọgide na-agụIndia nwere ike ịkwaga iji kesaa Bitcoin dị ka klas akụ
Ọgwụgwụ nke ọdịnaya
O nweghi ibe ozo I gha ebu
Ihe ochie →